नेपालले बनायो नमूना विद्युतीय स्कुटर, के छन् विशेषता ?
एकपटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटरसम्म गुड्ने
बिहीबार, ८ बैशाख, २०७९- १४:२१:००/ Thursday 04-21-22
काठमाडौँ, ८ वैशाख । पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनको विकल्प खोज्नुपर्ने विचार लामो समयदेखि देशभित्र उठ्दै आए पनि वास्तविकतामा परिणत हुनसकेको थिएन ।
प्रतिष्ठानले मोबाइल एपबाटै मोटरसाइकल स्टार्ट गर्ने प्रविधिसमेत विकास गरेको छ । देशभित्र नै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण हुनसक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन पनि नास्टले यस खालको भूमिका निर्वाह गरेको गरेको हो । रासस
आकाशीय ग्रहहरुको अनुसन्धान गरिने
टेलिकमले उपलब्ध गराउन लागेको ई–सिम कस्तो हो ?
चन्द्रमामा मानिसले बस्ती बसाए भने त्यहाँ उनीहरूले के खालान्?